သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ တာမွေမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
တာမွေမြို့နယ်၊ ၁၆၂ လမ်း၊ တိုက်ခန်း အရောင်း - သိန်း ၃၇၀/ညှိနှိုင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10063559 အတွက် NORA Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SA2-002971, For Sale Apartment, စိတၱသုခလမ္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာ င္းရန္ရွိပါသည္
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9989071 အတွက် SONE SEE YAR KO LATT REAL ESTATE သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အာယုဆေးရုံအနီး တိုက်ခန်း ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9968643 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မေတ္တာညွန့် မာလာနွယ်လမ်းမပေါ် တိုက်ခန်း ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9927652 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
TKT/S/202 သာကေတရှိ စစ်သူကြီးတိုက်ခန်းများအရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9904718 အတွက် SABEI REAL ESTATE စံပယ္အိမ္ျခံေျမ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9873123 အတွက် Great Pyi Taw Thit Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်မြောင်းစျေးအနီး အခန်းကျယ် အမြန် ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10115639 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်